ZITHINI IZIBONELELO ZOKUBONELELA NGAMANZI ESURYA DEV - PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
Izibonelelo zokubonelela ngamanzi kwiSurya Dev
Iindaba UVishnu Vishal noJwala Gutta babopha iqhina ngo-Apreli 22: Jonga iinkcukacha apha
Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Renu Ngu Renu ngoNovemba 29, 2018
Kukho oothixo noothixokazi abaninzi abanqulwa kubuHindu. Ngelixa u-Lord Ganesha, u-Lord Shiva, u-Lord Vishnu, njl njl. kubo bonke.
indlela yokufumana ubulungisa kwangoko ekhaya
Nangona kunjalo, ngaphandle kokwazi okuninzi ngayo, ukubonelela ngamanzi eSurya Dev yinto eqhelekileyo ezindlwini ezininzi. USurya Dev, isimntwiso selanga, ngokweetekisi zamaHindu, unqulwa rhoqo ngeCawa. Ilanga ngumthombo wokugqibela wamandla kungekuphela ngokwesayensi kodwa nangokweenkolelo zokomoya. Apha sichaza ukuba zeziphi izibonelelo zokubonelela ngamanzi eSurya Dev.
Ibali elisemva kwesi sithethe
Kwakukho idemon egama linguMandehas. Iidemon ezininzi zihlala zisebenzisa ukukholisa iNkosi u-Brahma ngokwenza isohlwayo esinzima. Uye wenza kwaoko wayehleli ecamngca iminyaka emininzi ekholisa u-Lord Brahma. Njengoko u-Lord Brahma wabonakala phambi kwakhe kwaye wacela umnqweno wakhe, wathi ufuna ukubamba uSurya Dev. Njengoko u-Lord Brahma wayeza kuzalisekisa isithembiso sokumnika umnqweno, wavuma kwisicelo sedemon. Idemon yenze uSurya Dev uthinjiwe ngoncedo lweNkosi uBrahma.
Nangona kunjalo, oku kubangele ubumnyama obupheleleyo emhlabeni kunye neengxwabangxwaba zisasazeke kuyo yonke indawo. Yathi iNkosi u-Brahma ikukubona oku, yacebisa abanye bababingeleli abasemhlabeni, ukuba babonelele ngamanzi eSurya Dev kwaye bacule iGayatri Mantra nayo. Oku kwamkhulula uSurya Dev ekuthinjweni kwedemon. Kukholelwa ukuba sinikezela ngamanzi eSurya Dev ukuze sikhusele nawaphi na amathuba okubuya kwedemon.
ISurya Dev inceda ukwandisa ukuzithemba kwethu. Unqulo lwakhe luhlala lucetyiswa kwabo banentembelo ephantsi kwaye boyika iimeko ngokulula okanye abaqala ukuphakuzela kungekudala. Ayisiyiyo le kuphela, umntu uhlala akhuselwe kwiingcinga ezimbi kunye nabantu ngokunjalo, ukuba unikezela ngamanzi eSurya Dev.
Iinwele ezi-spiky zamadoda aneenwele ezingqindilili
Kuyatshiwo ukuba uSurya Dev ngumphumeleli woloyiso. Yiyo loo nto ukwenza imithandazo kuye kunceda ekufumaneni iintsikelelo zakhe ukuze umntu ozinikeleyo aphumelele uloyiso kwiinkalo ezininzi zobomi.
Abo baneentshaba ezininzi kwaye bafuna ukukhululeka kuxinzelelo olunje, okanye abo bahlala boyikiswa ziintshaba, kufuneka babonelele ngamanzi eSurya Dev kwaye bacule iGayatri Mantra.
Kuthiwa ukunqula uSurya Dev okanye ukumnika amanzi kuyanceda ukuba ube sempilweni. ISurya Dev Vrat ihlala icetyiswa ukuphucula impilo kabani. Kuthiwa ukunqula kwakhe nako akuvumeli ukuba amehlo abuthathaka.
Intlonipho kwezentlalo sesinye sezizathu eziqhelekileyo ezichazwe njengezibonelelo zokubonelela ngamanzi eSurya Dev. Nangona kunjalo, kuba iSurya Dev inceda ukufumana ukuzithemba kunye nempumelelo kwaye yoyise iintshaba, ke unceda ukwakha udumo kuluntu ngokunjalo.
ngaba abasetyhini abakhulelweyo banokusela amanzi ecoconut
besan ki roti ukunciphisa umzimba
Ijusi yebhotile yomhluzi wokunciphisa umzimba
ketu kwindlu ye-9 yohambo lwangaphandle
I-manglik kunye ne-non manglik yeziphumo zomtshato
iziphumo ebezingalindelekanga juice yeetapile ebusweni